Liyoba kuphi ithuna lemoto yakho | IOL Isolezwe
Liyoba kuphi ithuna lemoto yakho
Isolezwe / 14 June 2012, 11:47am / STHEMBISO SHANGASE
SAPHINDA saqhamuka isidingo sokuthi sicindezele ama hazard ethu kwazise nakhu sesishayile isikhathi sokuthi sincele ulwazi ngezezimoto ngesikhathi sidedela labo mahlala bejahile ukuthi badlule bangaze basicefezele ngezimfengwane zabo.
Akwenzeki yini ngizihambela ngo-R614 ngikhuphukela eBhamshela ngas’Ozwathini, ngizithole sekufanele ngibekezelele umkhehlekhehle we-Toyota Cressida yakudala ngama 1980. Lo mdodovu wexhegu noma isalukazi semoto sitotoba ngalo mgwaqo nje siphethe abagibeli abayisikhombisa uma sengibala nomshayeli, bonke bakhokhile ukuze bafike eBhamshela ngayo lensimbi endala.
Eminyakeni embalwa eyedlule umnyango wezokuthutha uqale uhlelo lokuqeda izingqoshi nezikorokoro emgwaqeni ngoba zisolwa ngokuba amathuna ahamba ngamasondo. Lokhu kuphinde kwalekelela kakhulu ekunciphiseni izimoto ezikhafula isisi esingcolisa umoya kulezo ezithutha umphakathi.
Kanti-ke uma kuyimoto encane esiguge ngendlela engabekezeleleki emgwaqeni iphucwa igunya lokuba semgwaqeni kuxetshulwe ne-disc layo. Lokhu kusuke sekuthumela umyalezo wokuthi isiyoze izalele izinkukhu ekhaya, noma uyicwiye udayise lokho okusengadayiseka noma uyidayisele abama-scrapyard.
Kodwa ngesinye isikhathi uma abomthetho bebona ukuthi ukuyixebula idisc kuphela akuyisusi ingozi, bayayithatha bayigcine bathi yilande ngojibha ozoyigqogqosha ukuze ingalinge ibeke amasonjwana ayo emgwaqeni womphakathi.
Ngike ngathi ngibuka uhlelo lwezezimoto iTop Gear ku-TV ngezwa ukuthi kwamanye amazwe kuwukwephula umthetho ukushayela imoto endala kakhulu emgwaqeni ngaphandle uma usuyilondoloze njengomhlobiso ohamba imibukiso kuphela. Cabanga nje sewuphucwa usigedlemba wakho uyophonswa emshinini ogaya insimbi njengalokhu okwenzeka emakhumbini amadala. Mhlawumbe lomshini wokuwasha owuthenge ngesonto eledlule wakhiwe ngezinsimbi zaleya ngqoshi owawuyigibela usafunda amabanga aphansi useyingane.
Sengiyafisa ukwazi ukuthi uma unganikwa ithuba lokuvalelisa ngendlela ehloniphekile emotweni yakho esithatha uhambo lokugcina ungafisa kube njani, ungayenzela umcimbi ofuze lowaya wamhlazane ifika kuwe okokuqala ngqa noma ungafisa ingagaywa ihlale egcekeni izalele izinkukhu?
Hhayi-ke ngesikhathi sisacabanga ngezimoto zethu ezingomakade ebona, sivumeleni sivale ama-hazard ethu sibuyele emgwaqeni ebheke eMoses Mabhida eThekwini emgubhweni we-Top Gear sizesihlangane sisaphephile nangesonto elizayo kuyo lengosi yezezimoto. Yimi owenu.